Aza miandry. Tsy ho rariny ara-potoana mihitsy ny fotoana. - Napoleon Hill - Pedia Quotes
Aza miandry. Tsy ho rariny ara-potoana mihitsy ny fotoana. - Napoleon Hill
Ny fiandrasana dia iray amin'ireo ampahany amin'ny faritra ara-psykolojika olombelona. Amin'ny maha-olombelona antsika, dia maro no mieritreritra ny hiandry mandra-pahatongan'ny toe-javatra mahamety antsika. Ary noho io antony io, dia aleontsika foana amin'ny fotoana mety ho avy. Na izany aza, ny zavatra lehibe tsy maintsy ho azonao tsara tsy hitranga na oviana na oviana ny fotoana.
Tsy misy izany zavatra antsoina hoe fotoana mety izany. Tsy maintsy manaiky ianao fa na inona na inona kasainao hatao dia tokony hataonao izao. Na raha tsy izany dia ho tara loatra. Ka ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny tsy hiandry.
Fantatray fa manana drafitra sasany amin'ny fiainanao ianao. Ary miandry ny fotoana mety ianao hanatanteraka ny drafitrao. Saingy, raha te-hahita fahombiazana amin'ny fanatanterahana ny drafitrao ianao dia mila manomboka izao.
Angamba, ho fotoana kely ihany io, fa hamokatra ny vokatra. Ankoatra izany, tsy hahasoa anao akory ny fiandrasana, afa-tsy mandany andro kely sarobidy aminao. Ary raha mandany fotoana ianao, dia tsy ho tratranao velively ny fahombiazana maniry amin'ny fiainanao.
Noho izany, fotoana tokony hanombohanao amin'ny fanoloran-tena tanteraka. Nanome toky izahay fa hahatratra ny tanjonao tsy misy fotoana ny tanjonao.
Aza miandry valiny
Aza manimba ny fotoananao
Ataovy fotsiny izany
Teny momba ny fotoana sy ny fanovana
Ny lanjan'ny ora Quotes
Marina ara-bakiteny fa afaka mahomby tsara sy haingana indrindra amin'ny fanampiana ny hafa hahomby ianao. - Napoleon Hill
Marina ara-bakiteny fa afaka mahomby tsara sy haingana indrindra amin'ny fanampiana ny hafa hahomby ianao. - Napoleon ...
Matetika ny safidy dia tonga amin'ny endrika ratsy, na faharesena vetivety. - Napoleon Hill
Matetika ny safidy dia tonga amin'ny endrika ratsy, na faharesena vetivety. - Napoleon Hill Teny nalaina momba:
Ny fanombohana amin'ny zava-bita rehetra dia ny faniriana. - Napoleon Hill
Ny faniriana dia fahatsapana mafy te-hahatontosa zavatra iray. Ny faniriana koa dia manondro ny faniriana zavatra…
Raha tsy vitanao ny manao zavatra lehibe, manaova zavatra kely amin'ny fomba lehibe. - Napoleon Hill
Tsy ilaina ny manao zavatra lehibe hahombiazana. Ny olona mahomby dia nahavita fahombiazana tamin'ny…